A Dinosaur Costume, chivaraidzo Park akatasva - Ocean Art
Kufamba Dinosaur Ride
Dinosaur Battery yekutengera
Washington City Offices Model
Washington City Offices Dinosaurs
Washington City Offices Animal
Washington City Offices Cartoon Sculpture
(Hereinafter kunzi Ocean Art), rakavambwa muna 2009, riri mu High hwemberi mukugadzira Industrial Park, Zigong City, Sichuan Province, uye chinhu Integrated zvesayenzi uye kugadzira zvinhu zvebhizimisi izvo nyanzvi kugadzira & kukura, gadzira, kutengesa, uye kuratidzira kuti simulation zvigadzirwa. Ocean Art tichifunga kutsvakurudza uye pave animatronic dinosaurs, simulation nemhuka nezvipembenene, dainoso zvisaririra uye marangwanda, chakagadzirwa zvirimwa zvekare, akavigwa kupikidura munda, vakasiyana nharaunda uye achifamba dainoso nguo nezvimwe simulation zvigadzirwa.
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana price list, chete nesu! muvhunzo
Case pryslys ratidza
Dinosaur Park mu Russia, 2016 Winter
Dinosaur Park mu Russia, 2016 Summer
2017 Dinosaur Dream Park mu Xiamen
rima hahungavi chikonzero kumisa vana vachishanyira dainoso dingindira park, uye iyi ndiyo yakanakisisa uchapupu.
Vokutanga makumi matanhatu Chinese Dinosaur nyeredzi Haitang Bay dainoso Park ndiwo musimboti dainoso kutsvakurudza China. Vari zvose akaratidza munzira 1: 1 yepakutanga guru womuenzaniso. The matanhatu mhando animatronic dainoso izvo maded kubudikidza nesu mupaki kunge yakaiswa. dinosaurs aya akagadzirwa simbi marangwanda uye silica gel pemvura. Vanogona adzorere muviri uye kuti ruzha, uye simulation chaizvo.
2016 Summer.Everyone anoda kuona dinosaurs ari dingindira Park nokuti munowedzera mafaro. Kunyanya vana, ndivo kupenga pamusoro animatronic dinosaurs. Pari, vakawanda dingindira mumapaki vaine animatronics mhuka uye yokutevedzera, zvikurukuru dinosaurs kuti anobatsira kukwezva visitors.And dainoso ichi Russian paka ndiye muenzaniso yakanakisisa.
The yakanakisisa dainoso paka yakavhurwa Xiamen. Hazvina vakasiyana zvetsika dainoso paki uye zvakawanda sezvinoita miziyamu dainoso nesayenzi. Mushanyi ose anowana yakakwana uye zvinofadza kuona ruzivo
More Best-kutengesa Products
Address: No.93, yejiagou, lianggaoshan mumugwagwa, da 'an dunhu, zigong guta